Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Job 29
Nepali New Revised Version, Job 29
1 तब अय्‍यूबले आफ्‍नो बहस गर्दैरहे:
2 “बितेका महिनाहरूको म कत्ति चाहना गर्दछु, जुन समयमा परमेश्‍वर मेरो हेरचाह गर्नुहुन्‍थ्‍यो!
3 जब उहाँको दियो मेरो शिरमाथि चम्‍कन्‍थ्‍यो, र त्‍यसको उज्‍यालोद्वारा म अँध्‍यारोमा हिँड्‌डुल गथेंर्!
4 मेरो उत्तम समयका दिनहरू, जब परमेश्‍वरको नजिकको सम्‍बन्‍धले मेरो घरलाई आशिष्‌ दिन्‍थ्‍यो।
5 जब सर्वशक्तिमान्‌ अझै मेरो साथमा हुनुहुन्‍थ्‍यो, अनि मेरा छोराछोरीहरू मेरा चारैतिर खड़ा भइरहन्‍थे।
6 जब मेरो बाटोमा दूध बहन्‍थ्‍यो, र चट्टानहरूबाट जैतूनको तेल बग्‍थ्‍यो।
7 “चोकमा बस्‍नलाई जब म सहरको मूल ढोकाबाट भएर जान्‍थें
8 जवान मानिसहरू मलाई देखेर बाटो छोड़िदिन्‍थे, र वृद्ध मानिसहरू खड़ा हुन्‍थे।
9 अधिकारी वर्गको मुखै बन्‍द हुन्‍थ्‍यो, र आफ्‍नो मुख हातले छोप्‍थे।
10 भारदारहरूको बोली नै बन्‍द हुन्‍थ्‍यो, तिनीहरूको जिब्रो तालुमा टाँसिन्‍थ्‍यो।
11 “मैले बोलेको सुन्‍नेहरूले मेरो गुणगान गर्थे, र मलाई देख्‍नेहरू मेरै योग्‍यताको साक्षी दिन्‍थे।
12 किनभने सहायताको लागि पुकारा गर्दा गरीब मानिसहरूलाई, र रक्षाहीन पितृहीनहरूलाई मैले बचाएँ।
13 मर्न लागेको मानिसले मलाई आशीर्वाद दिन्‍थ्‍यो, र मैले विधवाको मन आनन्‍दले गाउने पारिदिन्‍थें।
14 धार्मिकतालाई मैले आफ्‍नो लुगाजस्‍तै लगाएँ, इन्‍साफलाई मैले मेरो पोशाक र फेटाझैँ लगाएँ।
15 अन्‍धाको लागि म आँखा भएँ, र लङ्गड़ाको निम्‍ति खुट्टा।
16 दरिद्रको लागि म बाबुझैँ थिएँ, र विदेशीको पक्षमा म मुद्दामा खड़ा हुन्‍थें।
17 अधर्मीको शक्तिलाई मैले नाश गरें, र त्‍यसको मुखबाट मैले शिकार खोसें।
18 “ ‘म दीर्घायु भएर मर्नेछु, र घरमा सुखसित मर्नेछु’ भनी आशा गरेथें।
19 ‘मेरा जराहरू पानीतिर फैलिएर जानेछन्‌ र रातभरि मेरा हाँगाहरूमा शीत बस्‍नेछन्‌।
20 मेरो महिमा मसित सधैँ ताजा हुनेछ, र मेरो हातमा धनु सधैँ नयाँ हुनेछ’।
21 “मानिसहरू ठूलो आशा लिएर मेरो कुरा सुन्‍थे, र मेरो सल्‍लाहको निम्‍ति चूपचाप पर्खिरहन्‍थे।
22 म बोलिसक्‍दा तिनीहरूले थप्‍ने कुरो केही हुँदैनथ्‍यो। मेरा वचन तिनीहरूका हृदयमा बिस्‍तारै भिज्‍दैजान्‍थे।
23 वर्षाको प्रतीक्षा गरेझैँ तिनीहरू तिनका लागि पर्खिरहन्‍थे, र बसन्‍तको झरीझैँ तिनीहरूले ती वचन पिउँथे।
24 म मुसुक्‍क हाँसिदिँदा तिनीहरूले साहस पाउँथे, मेरो उज्‍यालो अनुहार तिनीहरूका निम्‍ति बहुमूल्‍य हुन्‍थ्‍यो।
25 तिनीहरूले लाग्‍नुपर्ने बाटो मैले छानिदिन्‍थें र फैसला गरिदिन्‍थें, राजाले आफ्‍नो फौजलाई युद्धमा लगेझैँ म तिनीहरूलाई लान्‍थें, र शोक गर्नेहरूलाई सान्‍त्‍वना दिनेझैँ म थिएँ।”
Job 28 Choose Book & Chapter Job 30